> Resource > YouTube > Sida loo Download YouTube Videos si iPhone
Ma doonaysaa inaad kala soo baxdo YouTube video on your iPhone for loo maqli on go ah? Waxaad aadan keligaa in this. Galitaanka YouTube videos online u baahan tahay si dhakhso internet ama network WiFi. Laakiin internet iyo network WiFi ma yihiin meel walba. Sidaas darteed waa fikrad fiican in aad kala soo bixi YouTube videos si iPhone for loo maqli offline. Oo waxaa war fiican ah in iPhone cusub oo laga bilaabi doonaa 10-ka September. IPhone cusub ee la magacaabay waxaa laga yaabaa in sida iPhone 5S iyo iPhone 5C. Marka aad hesho kuwa smart qalabka, waxaa laga yaabaa inaad ka badan diyaar u ah inay soo daawadaan YouTube videos iyaga on.
Sida aad ogtahay, website YouTube ma bixiyaan adeeg dajinta online. Marka aad rabto in aad kala soo bixi YouTube videos si iPhone, Wondershare AllMyTube ( AllMyTube u Mac ) waa gargaar aad u weyn. Iyadoo qasabno yar, waxaad kala soo bixi kartaa oo aanay u YouTube in lagu daydo wax ka mid ah iPhone, oo ay ku jiraan iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5 iyo iPhone 5S / 5C cusub.
Download barnaamijka oo aad hesho waxaa lagu rakibay on your computer. Halkan waxa ku jira talaabooyin fudud oo ku saabsan sida loo isticmaalo.
1 click Mid ka mid ah si loo badbaadiyo YouTube video
Play video YouTube ku siiyaa biraawsarkaaga iyo riix badhanka Download ku yaal dhinaca midig ee sare. Oo weliba aad nuqul karaa url video oo riix badhanka URL koollada ku saabsan barnaamijka. Labada ka mid ah laba siyaabood soo bixi karaan shaqo dajinta.
2 Beddelaan YouTube in qaab iPhone
Riix badhanka Beddelaan xaqa ka bandhigay video ee qaybta soo bixi dooro iPhone sida qaab wax soo saarka. Ka dib markii videos ku soo jeesan, waxaad ka heli kartaa meesha ay ku kaydsan ka dibna lagu wareejiyo si aad iPhone gacanta.
Fiiro gaar ah: In uu furmo suuqa hoose, biiro on the "Download markaas Beddelaan" button on dhankiisii ​​midig iyo hogaanka oo ay doortaan model iPhone aad ee liiska pop-up qaabka. Markaas waxaad kala soo bixi kartaa oo aanay u YouTube videos degna.
Hoos ka eeg a video tutorial tallaabo-tallaabo:
Sida loo Daawo YouTube in Motion gaabis ah
YouTube FLV si iPhone 5: Sida loo Play YouTube on iPhone 5 Cusub